राप्रपा अध्यक्षमा भिड्न टिम बनाउँदै थापा र लिङ्देन, कसलाई कसको साथ ? « Deshko News
राप्रपा अध्यक्षमा भिड्न टिम बनाउँदै थापा र लिङ्देन, कसलाई कसको साथ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता महाधिवेशन बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ। तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) बीच एकीकरण भएर बनेको राप्रपाको पहिलोपटक एकता महाधिवेशन हुन लागेको हो। हाल राप्रपामा ३ वटा अध्यक्ष छन।
एकता महाधिवेशनपछि पार्टीमा एकजना मात्र अध्यक्ष हुनेछन्। अध्यक्ष पदका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। महाधिवेशन अन्तर्गत बिहीबार बन्द सत्र हुनेछ भने शुक्रबार नेतृत्व चयनको कार्यक्रम तय गरिएको छ। राप्रपामा केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी १ सय ४९ जना निर्वाचनबाट छानिनेछन् भने केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी ५० जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा देखिएका थापा र लिङदेनले आआफ्नो टिम बनाउन सुरु गरेको छन्। थापाको टिममा उपाध्यक्ष तथा महामन्त्रीमा विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, धु्रव प्रधान, जयन्त चन्दलगायतलाई समेट्न प्रयास भएको छ। यसैगरी लिङदेनको टिममा जगत गौचन, दुर्गा श्रेष्ठ, श्याम तिमिल्सना, धवलशमशेर राणा, भाष्कर भद्रा, रेखा थापा लगायतलाई समेट्न प्रयास भइरहेको छ।
अहिलेसम्म थापा र लिङदेन आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। थापाले लिङदेनलाई चार वर्षसम्म धेर्य गर्न आग्रह गरेका थिए। तर लिङदेनले राप्रपाको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा आउनुपर्ने बताउँदै त्यसकै लागि आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको जनाएका छन्। निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन देशभरबाट राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।